श्रीमतीलाई काँधमा बोकेर दौडिने अनौठो प्रतियोगिता, जित्नेले पाउँछ यस्तो पुरस्कार - Saptakoshionline
श्रीमतीलाई काँधमा बोकेर दौडिने अनौठो प्रतियोगिता, जित्नेले पाउँछ यस्तो पुरस्कार
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २४, २०७६ समय: ५:२०:१५
आफ्नै पत्नीलाई काँधमा बोकेर दौडिनुपर्ने प्रतियोगिता पनि दुनियाँमा कहीँ होला ? तर हुँदो रहेछ । अझ यस्तो प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले आफ्नै पत्नीको जिउको वजन बराबरको वियर पुरस्कारको रुपमा पाउँछ भन्दा झनै अनौठो लाग्ला ।
फिनल्याण्डको सोन्काज्भीमा सन् १९९२ हरेक वर्ष यो प्रतियोगिताको आयोजना गरिँदै आएको छ ।
गत शनिबार सम्पन्न यो वर्षको प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि केवल फिनल्याण्डका मात्र होइन, फ्रान्स, जर्मनी तथा अस्ट्रेलियालगायतका कैयन् देशका जोडीहरु सहभागी भएका थिए ।
दौडिने ट्रयाकको कूल लम्बाइ २५३.५ मिटर रहेको छ । त्यसभित्र दुईवटा सुख्खा तगारा तथा एउटा एक मिटर गहिरो पानीको कुवा पनि पार गर्नु पर्दछ ।
मच्छर भगाउनका लागि अपनाउनुस् यस्तो तरिका
गर्मी महिना सुरु भएसँगै घरमा मच्छरको आतंक सुरु भइसकेको छ । अझ गर्मी क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई मच्छरले धेरै नै सताउने गर्छ । ...
ट्वाइलेटमा मोबाइलको प्रयोग, स्वास्थ्यका लागि नराम्रो
अहिलेको जमानमा मोबाइलको प्रयोग जरुरतभन्दा पनि अगाडि बढिसकेको छ । केही अघिसम्म फोन गर्न मात्र प्रयोग हुने मोबाइल अब जीवन...
मोबाइल हरायो, यस्तो छ आफैंले भेट्टाउने उपाय
अनेकौं तनावले मोबाइल फोन कतै राखेर विर्सने तथा हराउने आम नेपालीको समस्या हो । कतिपयले जानाजानी दुःख दिनकै लागि समेत मोबा...
पाँच बच्चाकी आमा र उनका प्रेमीको गाउँलेले काटिदिए नाक
पतिलाई धोका दिएर अर्को प्रेमी बनाउने एक महिलाले निकै ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नु परेको छ । यो भारतको अयोध्याको घटना हो । त्य...
यस्तो गाउँ जहाँ पुरुष पहिरिन्छन् महिलाको कपडा !
यो थाइल्यान्डको एउटा गाउँको कथा हो । त्यहाँ भूतका कारण केही मानिसहरुको मृत्यु भएको विश्वास गरेपछि त्यहाँका पुरुषहरुले पन...
सुमन कोइराला इटहरीमा भोटको अपिल गर्दै
पहिलो कमेडी रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनको फाईनलको चरण सुरु हुनुअघि इटहरीका आफ्ना फ्यानहरुलाई भेट्न उनी इटहरी आएका हुन् ...